ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အဆင့်က သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အဆင့်က သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
Author: lubo601 | 10:46 PM | No မှတ်ချက် |
ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် ၊ Flower News Journal အတွဲ (၁၀) အမှတ် (၁၁)
လေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်၏ ခရမ်း လွန်ရောင်ခြည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည် သူ များကို သတိပေးပြောကြားချက်အချို့အား တင်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။ ယခုအခါ ဆောင်းရာသီအကုန် နွေ ရာသီ အကူးအပြောင်းကာလဖြစ်သော်လည်း နေ့စဉ် အပူချိန်သည် ရှိသင့်သော အပူချိန်ထက် ပိုမိုမြင့်မားနေ ပြီး လူတွေခံစားရသောအပူရှိန်သည်ပင် အန္တရာယ်ရှိသော အဆင့်တွင် ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာ ဒေါက်တာထွန်းလွင် က ယခုလိုပြောပါသည်။
''အခုချိန်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကျရောက်နေ တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အဆင့်က သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်။ ကျန်းမာရေးအ တွက် အထူးဂရုစိုက်သင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်လွန်ကဲအဆင့်ရောက်နေပြီမို့ အန္တရာယ်ရှိနေ ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လူတွေကို နေရောင်ခြည်အောက် မထွက်စေချင်ဘူး။ နေရောင်ခြည်နဲ့ အသားအရေကိုမထိ စေချင်ဘူး။ တော်တော်ကို အန္တရာယ်ရှိလို့ပြောတာပါ။
လူတွေအနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာ တော့ နေအပူရှိန်ပြင်းတဲ့ အချိန်တွေရှောင်သင့်တယ်။ ဝတ် နေကျဘောင်းဘီတို၊ အင်္ကျီအတိုတွေကို မဝတ်တော့ဘဲ လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်စားသင့်ပါတယ်။ အသားအရေကို အဲဒီ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မထိစေချင်ဘူး။ ခေါင်းကို ဦးထုပ် ဆောင်းပါ။ မျက်လုံးကို အကာအကွယ်ပေးပါ။ မျက်မှန် တပ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လုံလုံ ခြုံခြုံရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဆရာ့အနေနဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၊ ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတို့၊ အက်ဖ်အမ်တို့ကပြောနေ ရေးနေ ပေမယ့် အခုလိုကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင် အဓိကက တော့ အစိုးရမှာ တာဝန်အများကြီးရှိပါတယ်။ အချိန်မီသတင်းတွေ ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်တွေကို ပြည်သူတွေသိအောင် အသိပေးဖို့လိုတယ်။ မနှစ်က စလို့ အခုလိုမိုးကြိုကာလ ကို ရောက်လာရင် အပူ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အန္တရာယ် တစ်ခုတွေ့လာရပါ တယ်။ ဒါက
တော့ လူတွေရဲ့ခံစားရတဲ့အပူချိန်တွေဟာ သာမိုမီတာ နဲ့ တိုင်းလို့ရတဲ့ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေထက် အများကြီး ပိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ Heat Index or Feel Temperature လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရတာကတော့ လေထုထဲမှာ ရေငွေ့တွေပါလာတဲ့အခါ တိမ်တွေ ဖြစ်လာပေမယ့် မိုးအဖြစ်မရွာချနိုင်ခဲ့ရင် ရေ ငွေ့တွေကြောင့် အပူချိန်တွေ ထပ်လောင်း တိုးလာစေတဲ့ သဘာဝကြောင့်ပါပဲ။
၂ဝ၁၂ခုနှစ်တုန်းက ဧပြီ ၂၉ရက် မှာ H.I. 56°C နဲ့ မေ ၇ ရက်နေ့မှာ H.I. 62°C အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူတွေသေခဲ့ပါတယ်။
အခု အဲဒီကာလထဲ တဖြည်းဖြည်း ဝင်လာ နေပါပြီ'' ဟူ၍ ဖြစ် သည်။